यमपञ्चकका ५ दिन : कुन दिन के गर्ने ? |
November 28, 2021, 11:39 pm
गृह पृष्‍ठ कपिलबस्तु यमपञ्चकका ५ दिन : कुन दिन के गर्ने ?
यमपञ्चकका ५ दिन : कुन दिन के गर्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक १७ , बुधबार ०९:३६
ज्योतिष प्रकाश पौडेल ।
बडादशै अर्थात विजया दशमी अगत्तै आउने नेपाली (सनातनी)हरुको दोस्रो महान् पर्व भाईटिका अर्थात तिहार हो । तिहारको आफ्नै महत्व रहेको छ । छिमेकी देश भारतमा तिहार दिपावलीको नाम बाट प्रशिद्ध छ । यस बर्ष अर्थात २०७८ मा भाई टिका,,कात्र्तिक २० गते शनिवार पर्न गएको छ ।
यस बर्ष यमपञ्चक कात्र्तिक १६ गते बाट प्रारम्भ भै सकेको छ । साथै १६ गते धन्वन्तरी जयन्ति अर्थात धन्वन्तरी देवको प्राकट्य दिवस पनि हो , चान्द्रमास अनुसार कात्र्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन समुन्द्र मन्थन गर्दा धन्वन्तरी भगवान् अवत्रित भई अमृत प्रदान गर्नु भएको कुरा श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएको छ । धन्वन्तरी जयन्ती÷धन्तेरस अर्थात दिपावली विशेष किनमेलका लागी शुभ मानिन्छ ।
कात्र्तिक कृष्ण त्रयोदशी देखि कात्र्तिक शुक्ल द्वितीया सम्म यम पञ्चक अर्थात तिहारको रुपमा मनाईने गरिन्छ । यश बर्ष काग÷कुकुर तिहार एकै दिन अर्थात कात्र्तिक १७ गते परेको छ । काग कुकुर दुवै यमराज को नगरी यमपुरी मा काम गर्ने दुत समेत रहेको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख पाईन्छ । काग कुकुरको काम जन्म मृत्यु विवरण राख्नुहो । १७ गते विहान रात छदै स्नान गरी । सम्मान स्वरुप कुकुरको पुजा–आजा गर्नु पर्छ ।
लक्ष्मी पुजा यश बर्ष कात्र्तिक १८ गते रहेको छ । यश दिन हरियो गोवरले लिपि धनकी देवि लक्ष्मी विशेष पुजा गरीन्छ लक्ष्मी पुजाका लागी मुहूर्त वृष लग्न अर्थात साँझ ०५ बजेर ५९ मिनेट पछि ०७ बजेर ५४ मिनेट सम्म शुभ रहेको छ ।।
गोवद्र्धन पुजा गाई गोरु पुजा–वलिपुजा कात्र्तिक १९ गते परेको छ । हिन्दु सनातन धर्ममा जननी,गाई,पृथ्थिवी,आदि गरी ७ माता (आमा) मानिएको छ । भगवान्का अंशावतार पृथुले पृथ्थिवीलाई गाई रुपमा दोहन गरी जिवन जिउन उपयोगी वस्तु दोहन गरी जिवको रक्षा गर्नु भएको कथा श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरीएको छ जिवन दिने लाई आमा भनिन्छ । विहानै स्नान गरी गोवद्र्धन पुजा गाई गोरु एवं वलि पुजा गर्नु पर्छ ।
यमद्वितीया अर्थात भाइटिका यश बर्ष कात्र्तिक २० गते शनिवार परेको छ । भाई टिकाका लागी शुभ मुहूर्त वार वेला अनुसार विहान ०७ः३९ देखि०९ः०१ बजे सम्म शुभ वेला अभिजित् मुहूर्त ११ः२३ बाट १२ः७ सम्म रहेको छ उपरोक्त समय मा टिका ग्रहण गर्न प्रारम्भ गर्दा शुभ हुन्छ । तर ०९ः०३ देखि १०ः२५ सम्म राहुकाल रहेको ले यश समय मा टिका ग्रहण गर्न हुदैन विशेष अर्थात सर्वोत्तम मुहूर्त खोज्नेहरुका लागी विहान ११ःबजेर ०२ मिनट मा (पछि)सर्वोत्तम समय रहने छ ।।
कपिलवस्तुका लागी टिकाको साइत
अक्षांस रेखांखको आधारमा सूर्योदय मापन गरेको क्षेत्रबाट २४ कि.मी बराबर १ मिनेटको फरक रहेकोले गर्दा कपिलवस्तुमा शुभ मुहुर्त (वारवेला) रहेको ८ मिनेट पछि टिका ग्रहण गर्नु शुभ फलदायक रहको छ । त्यस्तै रुपन्देही ०९, अर्घाखाँची ९, गुल्मी ०८,सुर्खेत १६, रुकुम् ११मिनटको फरकमा टिका ग्रहण गर्दा शुभ हुन्छ । टिका ग्रहण गर्दा उत्तर वा पश्चिम मुख गरी टिका थाप्नु शुभ फलदायक रहने छ ।
ज्योतिषाचार्य –प्रकाश पौडेल नेपाल ज्योतिष परिषद् कपिलवस्तुका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ ।
पछील्लो पोस्ट झिलिमिली बत्ती वा दियो बाल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह
अगिल्लो पोस्ट पेस्तोल सहित कपिलवस्तुमा एक युवक पक्राउ
गौशालाको उद्धघाटन गदै रामदतिवनको साधारण सभा सम्पन्न